ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ် Crystal Glass ကြိုးမဲ့အလင်းခလုတ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
China Discount Crystal Glass Wireless Light Switch Quotation ကိုဝယ်ပါ။
Crystal Glass Wireless Light Switch အတွက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
Crystal Glass Wireless Light Switch အတွက် အင်္ဂါရပ်များ-
[Touch Control] သင်၏ Crystal Glass ကြိုးမဲ့အလင်းခလုတ်ကို ထိခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
[Voice Control] Smart switch သည် Amazon Alexa၊ Google home နှင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ Crystal Glass Wireless Light Switch အတွက် သင့်အသံဖြင့် သင့်အလင်းရောင်ကို ဖွင့်/ပိတ်နိုင်သည်။
[Remote Control] သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် မည်သည့်နေရာမှမဆို သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ၎င်းကို manually ထိန်းချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
[အချိန်ဇယား] Timer ဖြင့်ပြောင်းခြင်းသည် သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ပိတ်ရန်မေ့သွားခြင်းအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ညနေအတွက်အချိန်သတ်မှတ်ပါ။ နောက်တော့ အမှောင်အိမ်ထဲကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူး။
[စက်ပစ္စည်းမျှဝေခြင်း] သင့်စက်ပစ္စည်းကို သင့်မိသားစုဝင်များထံ မျှဝေပါ။ Smart Switch သည် သင့်ဘဝကို စမတ်ကျစေပြီး ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Crystal Glass ကြိုးမဲ့အလင်းခလုတ်အတွက် ကန့်သတ်ချက်များ-
စမတ်အလင်းခလုတ် (ကြားနေနှင့် တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန် လိုအပ်သည်)
ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း အဝေးထိန်းခလုတ်၊ အသံထိန်းချုပ်မှု၊ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဗို့အား AC110V ~ 250V (50/60Hz)
ပါဝါ LED Max.: 150W
Resistance Load Max.: 500W
အက်ပ် Tuya စမတ် / စမတ်ဘဝ / စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
အတူအလုပ်လုပ်သည်။ Google Home & Alexa
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ကြားနေနှင့် တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန် လိုအပ်သည်။
အရောင် အဖြူ / အနက် / စိတ်ကြိုက်
hot Tags:: Crystal Glass ကြိုးမဲ့အလင်းခလုတ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်